Tantara iray avy amin’ny Global Voices manampy ireo mpandresy tamin’ny fifaninanana fandikanteny amin’ny fanehoana ny firehetampony ho an’ny teny Tseky · Global Voices teny Malagasy
Tantara iray an'ny GV avy any Mozambika ilay lahatsoratra nifaninanana.
Voadika ny 29 Avrily 2019 20:58 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Ελληνικά, Español, čeština , Français, русский, Esperanto , українська, English
Manokatra ny fety fanolorana ireo loka i Jan Faber, mpiara-mikarakara ilay fifaninanana fandikanteny. Eo amin'ilay efijery ao aoriany misy ilay lahatsoratry ny GV amin'ny dikany Yoruba. Sary avy amin'i Filip Noubel ary nampiasaina niaraka amin'ny fahazoandalana.
Rehefa nanoratra tantara tany am-piafaran'ny taona 2018 tany ny mpanoratra ato amin'ny Global Voices (GV) Dércio Tsandzana mikasika ireo voalohany mpandraharaha anaty fiaramanidina tsy misy afa-tsy vehivavy manontolo tao Mozambika, tsy hainy fa hiaina indray ity lahatsoratra ity ho toy ny lahatsoratra andry iorenan'ny fifaninanana fandikanteny maneran-tany nokarakaraina tao amin'ny Repoblika Tseky.
Ilay lahatsoratr'i Dércio’, nosoratan'ny tamin'ny teny Portiogey tamin'ny voalohany, dia efa niavaka tsara noho ny mahazatra tety anivon'i GV, nadika tamin'ny teny niisa 13 izany, izay ahita ny Arabo, Poloney, Yoruba, Grika ary Sinoa. Tsaroan'i Dércio ny nahaterahan'ilay lahatsoratra : “Nahazo vaovao mikasika ity ekipa ity aho tamin'ny alalan'ny vondrona firesahana tao amin'ny WhatsApp, raha toa ka nanatrika fivoriana tany Ghana mikasika ny Aterineto. Tamin'izany alina izany, nanapa-kevitra aho ny hanoratra teo noho eo ilay tantara. Tena hagagana lehibe fa teo anivon'ireo tantara rehetra, ity no voasafidy ho an'ilay fifaninanana fandikanteny amin'ny teny Tseky!”
Tamin'ny volana febroary 2019, nifandray tamin'ny GV ny andrim-panjakana roa miorina ao Prague, ny Ivontoerana Fianarana Tenim-pirenena sy Fanomanana (ÚJOP) (sampana iray amin'ny Oniversite Charles), ary ny birao Tseky an'ny Tale Jeneralin'ny fandikanteny ao amin'ny Vaomiera Eoropenana (DGT) mba hangatahan alalana hampiasa lahatsoratra iray avy amin'ny GV ho an'ilay fifaninanana manerantany ho fandikanteny mankany amin'ny teny Tseky, izay efa miditra amin'ny faha-efatra taonany. Manome fahafahana ireo vahiny mpianatra ny teny Tseky mba hitsapa ny fahaizany mandika teny avy amin'ny tenindrazany hankany amin'ny teny Tseky izany fifaninanana izany. Tamin'ity taona ity, nahitana mpiteny Arabo, Sinoa, Frantsay, Italiana, Poloney, Rosiana ary Sloveniana ity lisitra ity.
Nasaina mba hanatrika fivoriana nandritra ny roa andro ireo mpilalao tamin'ny dingana famaranana ary koa tamin'ny fety fanolorana loka tany Prague tamin'ny 11 sy 12 Aprily. Nanatrika izany fety izany aho tamin'ny maha-toniandahatsotra ahy ato amin'ny GV ary nanolotra ireo loka sy diplaoma ho an'ireo mpandresy. Nanao tafatafa tamin'ny roa tamin'ireo mpandresy ihany koa aho mikasika ny traikefa azony tamin'ny fadikana lahatsoratry ny GV, sy ny antony nanolorany tena hianatra tenim-pirenena sarotra toy ny teny Tseky.
Nahazo ny toerana faha-3 sy voalohany i Vesna Dragar sy i Sofia Rogozhnikova. Sary avy amin'i Filip Noubel ary nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoandalana.
Nanazava i Sofia Rogozhnikova, izay nahazo ny loka voalohany tamin'ilay fifaninanana fa:
Nanomboka tamin'ny reniko daholo izany, izay nianatra ny teny Tseky fony izy 16 taona, tao anatin'ny sehatry ny Finamànan'ny Sovietika sy i Tsekoslovakia. Nandeha tany amin'ny Oniversitem-pahavaratra aho fony 15 taona ary nanapa-kevitra ny hipetraka sy hianatra any Prague. Nahazo diplaoma amin'ny fadikanteny tao amin'ny Oniversite Charles tao Prague ny tenako ary nanampy ny teny Italiana ho toy ny teniko fahatelo. Nianatra tany Italia ihany koa aho ary nanao ny fanadinana fandikanteny tamin'ny teny Italiana. Ankehitriny, mandika teny sy mampianatra ny teny Tseky ho toy ny teny vahiny. Tsy dia tena sarotra be ilay lahatsoratra fa manana teny somary teknika, ary tsy afaka nitondra afa-tsy rakibolana vita priny izahay nandritra ilay fifaninanana”.
Nilaza tamiko i Vesna Dragar, izay nahazo ny toerana fahatelo fa:
”Nisafidy ny Tseky ho toy ny tenimpirenena ‘tsy dia fahita’ tao amin'ny Oniversite nisy ahy tany Ljubljana aho satria mpankafy ny literatiora Tseky: ilay Miaramila Be Herim-po Švejk, fa ihany koa Kundera sy Hrabal. Tamin'ny taona lasa, nandray anjara tamin'ilay fifaninana aho ary nikasika ny angano “ilay Satrodoha Mena Kely” ny lahatsoratray tamin'izany, ka noho izany dia tsy nanampo tantara mikasika an'i Mozambika aho!”
Araka i Jan Faber, tomponanandraikitra ao amin'ny DGT any Prague ary amin'ny maha-mpandika teny Anglisy sy Poloney ny tenany ihany koa:
”Nahazo mpandray anjara 29 avy any Slovenia, Polonina, Frantsa, Rosia, Italia ary Ejipta izahay tamin'ity taona ity. Tsy maintsy niala ihany ny Oniversite sinoa satria tsy afaka ny nahazo isa sahazo tamin'ny rakibolana vita printy izy ireo mba ho ampiasaina mandritra ilay fifaninanana. Tsy manome alalana ireo loharano an-tambajotra izahay ary tena entitra be amin'izay lafiny izay satria manome fitsipidalao mitovy ho an'ireo mpandray anjara rehetra izany, tsy lazaina intsony ny hamafin'ireo fakampanahy hampiasana fanampiana ”tsy ara-dalàna” amin'ny Aterineto. Tena narisika be tamin'ny fahafantarana ny GV ireo mpianatra ireo ary hanao fanolorana mikasika ny GV ho an'ny mpiara-mianatra aminy any amin'ny Oniversiteny Mikołaj Kopernik any Toruń ny iray amin'ireo mpandray anjara. Ireo mpilalao 10 tamin'ny lalao farany, izay nasaina tao Prague, dia nandray anjara tamin'ny atrikasa fandikanteny izay nanandraman'izy ireo, tamin'ny alalana vondrona kely, ny handika ho amin'ny teny Tseky ny ampahany kely tamin'ilay angano malaza an'ireo Ry Grimm Mirahalahy”
Nanontaniana raha efa nahafantatra mikasika ny GV taloha, niaiky i Rogozhnikova fa ilay fifaninanana no voalohany, nefa nampiany fa:
”Tena hijery ny GV aho satria tiako ny mampitaha loharanom-baovao maro mba hialàna amin'ny vaovao tsy marina. Afaka mijery vaovao amin'ny teny maro aho ary manolotra safidy midadasika ao anaty toerana iray monja ny GV.”